FastStone Capture 7.3 Portable...! | အိမ်လွမ်းသူ...
ကျွန်တော်ဒီနေ့ Fast Stone Capture 7.3 Portable လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...! သုံးရတာလည်း အရမ်းလွယ်ကူပါတယ်...! အသုံးလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...! Capture အတွက် တောင်းထားတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေရှိလို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ...! Portable လေးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် သုံးရတာအဆင်ပြေလိမ့်မည်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်...!
• Record screen activities including onscreen changes, speech from microphone, mouse movements and clicks into highly compressed video files (Windows Media Video format). A built-in video editor allows you to draw annotations and add zoom effects to video files
• Acquire images from scanner
Fast Stone Capture... ( 3.5 MB )
No Response to "FastStone Capture 7.3 Portable...!"